बिहान उठ्नासाथ यी १० चीज देखिए भाग्य खुल्छ, के हुन ती १० चिज? जान्नुहाेस्… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > बिहान उठ्नासाथ यी १० चीज देखिए भाग्य खुल्छ, के हुन ती १० चिज? जान्नुहाेस्…
व्यक्तिको पैसासंग जोडिएको इच्छा कहिले पुरा होला, महालक्ष्मीको कृपा कहिले मिल्छ, यो जान्नको लागि ज्योतिषमा केही संकेत बताइएको छ। मान्यता छ कि जब यी संकेत मिल्छन् तब सम्झनुपर्ने छ कि व्यक्तिलाई लक्ष्मीको कृपा मिल्ने छ र पैसाको समस्या टाढा हुनेछ।व्यक्तिको पैसासंग जोडिएको इच्छा कहिले पुरा होला, महालक्ष्मीको कृपा कहिले मिल्छ, यो जान्नको लागि ज्योतिषमा केही संकेत बताइएको छ। जस्लाइ सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
मान्यता छ कि जब यी संकेत मिल्छन् तब सम्झनुपर्ने छ कि व्यक्तिलाई लक्ष्मीको कृपा मिल्ने छ र पैसाको समस्या टाढा हुनेछ। यदि कसैलाइ बिहान–बिहानै उखु देखाइ पर्छ भने निकट भविष्यमा धन सम्बन्धी कार्यमा सफलता मिल्नेछ। यदि घरबाट बाहिर निस्कनासाथ गाई देखा पर्छ भने यो शुभ संकेत हो। गाई यदि सेतो रंगको भए झनै शुभ हुनेछ।
नरिवल, शंख, मयुर, हास, फूल आदी चिज बिहान बिहान देखिए निकै शुभ मानिन्छ। निन्द्रा बाट उठ्ने बित्तिकै पहिलो नजर दुध वा दही राखिएको भाँडामा पर्छ भने निकै शुभ संकेत मानिन्छ। बिहान उठ्नासाथ शंख, मन्दिर वा घन्टीको आवाज सुनाइ दिनु शुभ मानिन्छ। यदि कसैको सपनामा पटक पटक हरियाली, लक्ष्मीको बहान उल्लु देखाइपरेमा निकट भविष्यमा धनको समस्या टाढा हुनेछ।
कुनै काम विशेषले बाहिर निस्कदा बाटोमा रातो साडीमा पुरै श्रृंगार गरेकी स्त्री देखिएमा महालक्ष्मीको कृपाको इशारा बुझ्न सकिन्छ। यस्तोमा त्यो दिनको कार्य सफल हुने अधिक सम्भावना हुन्छ। शास्त्रको अनुसार शुक्रबार महालक्ष्मीको पुजा गर्नाले विशेष कृपा मिल्छ। यो दिन कुनै कन्याले सिक्का दिएमा सो शुभ संकेत मानिन्छ।
यदि कोही व्यक्ति सपनामा सेतो सर्प, सुन रंगको सर्प देख्छ भने लक्ष्मीको कृपाको संकेत बुझ्नु पर्छ। यस्तो भएमा निकट भविष्यमा कुनै विशेष उपलब्धी हासिल हुनेछ। यात्रामा जाँदा सर्प, बाँदर, कुकुर या कुनै पंक्षी देखाइपरे शुभ सकेत हो। यात्रा मंगलमय रहनेछ।